ဦး သမီးက ကလေးလေး ရှိသေးတယ် ဆိုတဲ့ KTV က (၁၆) နှစ်အရွယ် သနားစရာ ကောင်မလေး - Update News
ဦး သမီးက ကလေးလေး ရှိသေးတယ် ဆိုတဲ့ KTV က (၁၆) နှစ်အရွယ် သနားစရာ ကောင်မလေး ကောင်မလေးကလည်း အကြိမ်ကြိမ်ငြင်းဆိုနေတာပေါ့ !
”ဦးရယ် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ခုမီးက…ခလေးရှိသေးတယ်” ဘောစိ ဦးလေးကြီးလည်း” မီးကိုသာရမယ်ဆို ဘယ်ပုဒ်မတွေမဆို ငွေနဲ့ဖြေရှင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း နွားအို မြက်နုကြိုက်တာ အစဉ်အလာဖြစ်ကြောင်း” ပြောဆိုကာ ဒူးထောက်၍ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းနေပြန်တယ် !
ကောင်မလေးကလည်း “ငရဲတွေကြီးပါ့မယ် ဦးရယ်…မီးက တကယ် ခလေးရှိပါသေးတယ်”ဆိုပြီးအကြိမ်ကြိမ်ငြင်းဆိုနေတော့…ဘောစိဦးလေးကြီးလည်း “မီးလေးရေ …ရှေ့ရေးစဉ်းစားလေ” ..ဆိုပြီး အမြဲ နားပူနားစာလုပ်နေတယ် !
နောက်ဆုံးတော့ မီးဆိုတဲ့ကောင်မလေးလည်း ဘောစိဦးလေးကိုမငြင်းသာ မလှုပ်သာပဲ လက်ထပ်ဖို့သဘောတူ လိုက်တယ် ကောင်မလေးက..ဦးနဲ့လက်ထပ်ပြီး ရွာကို ခဏ ဆိုပြီးပြန်သွားတာပေါ့ ! ဦးလည်း လွမ်းကာကျန်ရစ်ခဲ့တယ် ! နှစ်ရက်သုံးရက်နေတော့ ကောင်မလေး ဦးဆီကို ပြန်ရောက်လာတယ် ! ကောင်မ လေး(ခေါ် )မီးရဲ့ ဘယ်ဘက်လက်မှာ တစ်နှစ်အရွယ် ခလေးလေးတစ်ယောက် ချီပိုးပြီးပါလာတယ်။
အဲ့ဒီမှာ ဘောစိဦးလေးကြီးကဘယ်သူလဲမေးတာပေါ့ !“ဦးကို မီးပြောထားတယ်လေ…မီးကခလေးရှိသေးတယ်လို့ပြောထားတာ ဦးမေ့သွားပြီလား”တဲ့….! ဘောစိကြီးလည်း အဲ့ဒီနေရာမှာပဲရှော့ ဖြစ်ပြီး နန်းတော်ဆေးရုံရောက်ရှာပေါ့ !
0ာိန် 🙂 0ာိန် 🙂
ဦး သမီးက ကေလးေလး ရွိေသးတယ္ ဆိုတဲ့ KTV က (၁၆) ႏွစ္အ႐ြယ္ သနားစရာ ေကာင္မေလး ေကာင္မေလးကလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ျငင္းဆိုေနတာေပါ့ !
”ဦးရယ္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး ခုမီးက…ခေလးရွိေသးတယ္” ေဘာစိ ဦးေလးႀကီးလည္း” မီးကိုသာရမယ္ဆို ဘယ္ပုဒ္မေတြမဆို ေငြနဲ႔ေျဖရွင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏြားအို ျမက္ႏုႀကိဳက္တာ အစဥ္အလာျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာဆိုကာ ဒူးေထာက္၍ လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းေနျပန္တယ္ !
ေကာင္မေလးကလည္း “ငရဲေတြႀကီးပါ့မယ္ ဦးရယ္…မီးက တကယ္ ခေလးရွိပါေသးတယ္”ဆိုၿပီးအႀကိမ္ႀကိမ္ျငင္းဆိုေနေတာ့…ေဘာစိဦးေလးႀကီးလည္း “မီးေလးေရ …ေရွ႕ေရးစဥ္းစားေလ” ..ဆိုၿပီး အၿမဲ နားပူနားစာလုပ္ေနတယ္ !
ေနာက္ဆုံးေတာ့ မီးဆိုတဲ့ေကာင္မေလးလည္း ေဘာစိဦးေလးကိုမျငင္းသာ မလႈပ္သာပဲ လက္ထပ္ဖို႔သေဘာတူ လိုက္တယ္ ေကာင္မေလးက..ဦးနဲ႔လက္ထပ္ၿပီး ႐ြာကို ခဏ ဆိုၿပီးျပန္သြားတာေပါ့ ! ဦးလည္း လြမ္းကာက်န္ရစ္ခဲ့တယ္ ! ႏွစ္ရက္သုံးရက္ေနေတာ့ ေကာင္မေလး ဦးဆီကို ျပန္ေရာက္လာတယ္ ! ေကာင္မ ေလး(ေခၚ )မီးရဲ႕ ဘယ္ဘက္လက္မွာ တစ္ႏွစ္အ႐ြယ္ ခေလးေလးတစ္ေယာက္ ခ်ီပိုးၿပီးပါလာတယ္။
အဲ့ဒီမွာ ေဘာစိဦးေလးႀကီးကဘယ္သူလဲေမးတာေပါ့ !“ဦးကို မီးေျပာထားတယ္ေလ…မီးကခေလးရွိေသးတယ္လို႔ေျပာထားတာ ဦးေမ့သြားၿပီလား”တဲ့….! ေဘာစိႀကီးလည္း အဲ့ဒီေနရာမွာပဲေရွာ့ ျဖစ္ၿပီး နန္းေတာ္ေဆး႐ုံေရာက္ရွာေပါ့ !
0ာိန္ 🙂 0ာိန္ 🙂
Previous Article အဝတ်ဗလာနဲ့တင်လာတဲ့ပုံရိပ်တွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်ခြင်းကို အပြင်းအထန်ခံနေရရှာတဲ့မအေးသောင်း
Next Article LIVE လွှင့်ပြီး ကြိုဆွဲချနေသလို စနောက်ပြရင်းကနေ တကယ်မသာပေါ်တော့မလို ဖြစ်သွားတဲ့ကောင်မလေး (ရုပ်သံ)
တပ်မတော်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းမှ ထွက်ပြေးသည့်သင်တန်းသား ၅ ဦးကို ဗိုလ်ချုပ်သက်ပုံမှ အဆိပ်ကျွေးစီရင်
ပန်းပဲမောင်တင့်တယ်နှင့် သုံးရာသီလုံးမီးမငြိမ်းဘဲရှိနေသည့် နတ်မီး‌ေဝာက်အကြောင်း